विज्ञापन: तपाइँको सामाजिक मिडिया विज्ञापन को प्रभाव सुधार Martech Zone
विज्ञापन: तपाइँको सामाजिक मिडिया विज्ञापन को प्रभाव सुधार
बिहीबार, जुलाई 12, 2012 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 जेन लिसाक गोल्डिंग
समयको साथ, बजारहरूले सीसा उत्पन्न गर्न अद्वितीय र नवीन विधिहरू विकास गरेका छन्। तर अनलाइन विज्ञापन अझै पनी बजार मा एक प्रमुख स्थिति कायम। अप्रस २०११ मा सम्पन्न एप्पस्भावीको अध्ययन, "सामाजिक गतिविधि सूचकांक - सामाजिक विज्ञापनको प्रभावकारिताको मापन" अभिव्यक्त गर्दछ कि सामाजिक गतिविधिमा एकीकृत विज्ञापन जुन सामाजिक खेलहरू, अनुप्रयोगहरू, र वेब साइटहरूमा फैलिएको थियो, भुक्तान गरिएको खोज भन्दा ११ गुणा बढी प्रभावी छ, र दुई पटक धनी मिडिया जत्तिकै प्रभावकारी।
पारम्परिक इन्टर्नेट विज्ञापनहरू, सामाजिक मिडियामा वा कहिँ बक्स वा ब्यानर विज्ञापनहरू हुन्। प्रारम्भिक रूपमा प्रभावी हुँदा, त्यस्ता विज्ञापनहरूले अब कम सीपीएमहरू उत्पादन गर्दछ र वर्षौंको प्रभावकारितामा कमी आएको छ। २०१० ह्यारिस अन्तर्क्रियात्मक सर्वेक्षणले internet 2010 प्रतिशत इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताहरूले ब्यानर विज्ञापनलाई वेवास्ता गर्दछन्। यो आंशिक तथ्यको कारणले हो कि सामाजिक नेटवर्क प्रयोगकर्ताहरूसँग विज्ञापनमा समर्पित गर्न कम समय (र ध्यान अवधि!) छ, जुन उनीहरूले व्याकुलताको रूपमा लिन्छन्।
Appssavvy यो सुनिश्चित गर्न कोशिस गर्दछ कि सामाजिक मिडिया विज्ञापन को एक अनलाइन विज्ञापन को लागी एक नयाँ दृष्टिकोण संग एक स्वस्थ ROI को वितरित।
Appssavvy द्वारा विज्ञापन एक स्केलेबल गतिविधि आधारित विज्ञापन टेक्नोलोजी प्लेटफर्म हो जसले मार्केटर्सलाई अवस्थित सूचीमा खाली ठाउँ किन्नको लागि नयाँ विज्ञापन अवसरहरू अनलक गर्न अनुमति दिन्छ।
विज्ञापन प्लेटफर्मले सुनिश्चित गर्दछ कि प्रयोगकर्ताहरू यसको विज्ञापनहरूमा ग्रहणयोग्य रहन्छ। यसले प्रयोगकर्ताको व्यवहारलाई ट्र्याक गर्छ र विज्ञापन प्रदान गर्दछ जब प्रयोगकर्ताले गतिविधिको बिचमा ब्रेक लिन्छ। यसले विज्ञापनको समग्र अनुभवमा समाहित हुने कुरा पनि सुनिश्चित गर्दछ। अर्को शब्दहरूमा, यसले प्रासंगिक विज्ञापनहरू देखाउँदछ, विज्ञापनहरू प्रयोगकर्ताको मनपर्दो गतिविधिसँग सम्बन्धित छ भनेर निश्चित गर्दछ, र प्रयोगकर्तालाई अवरोध नपरोस् भनेर प्रयत्न गर्दछ।
मार्केटरले अभियान मेट्रिक्सको माध्यमबाट विज्ञापनको प्रभावकारितामा अन्तरदृष्टि प्राप्त गर्दछ, विश्लेषण र अनुसन्धान विज्ञापन द्वारा आपूर्ति।
अधिक जानकारी, मूल्य निर्धारण, वा विज्ञापन प्रयोग विज्ञापन प्रकाशन सुरू गर्नका लागि, कृपया भ्रमण गर्नुहोस्: http://appssavvy.com/#contact.
टैग: व्यक्तित्वAppSavvyअभियानमेट्रिक्सप्रयोगकर्ता व्यवहार
किन ईनबाउन्ड मार्केटरहरूले इन्फोग्राफिक्स प्रयोग गर्छन्
हो। चीजहरू निरन्तर एसएमको साथ परिवर्तन हुँदैछन् र यो राम्रो छ कि तपाईं SMA को परिवर्तनलाई बढावा दिन र प्रभावकारितालाई बढावा दिन सहयोगी सल्लाहहरूको साथ आउनुहोस्।